Shukulaatada faleebada Shukulaatada (loogu talagalay keegaga faleebada ah) - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Recipe faleebo Shukulaatada
Sida loo sameeyo faleebo shukulaato kaamil ah nooc kasta oo shukulaato ah
Dad badan ayaa i weydiiya sida loo sameeyo a shukulaatada faleebo doolshooyinkooda daataan. Caadi ahaan waan isticmaalaa biyo ganache durdurkayga shukulaatada cad iyo midabaynta cuntada. Tani waxay ka dhigeysaa xoogaa dhibco midab leh laakiin mararka qaarkood waxaad dooneysaa faleebo shukulaato dhalaalaysa oo wanaagsan.
Keegaga faleebooyinku waxay umuuqdaan inay yihiin keega cusub ee qaawan oo aad ayey u socdaan xilligan. Helitaanka faleebada saxda ah waxay noqon kartaa mid jahwareer leh haddii aad tahay laylis keega layliska ah. Laakiin ha walwelin, waxaan kuu kala jabin doonaa adiga oo ku bari doona sida loo sameeyo faleebada shukulaatada ugu fiican.
Haddii aadan waligaa samayn keeg faleebo ah, ha ka welwelin. Ma ahan wax aad u adag gebi ahaanba. Badanaa waxaan ogaadaa in my keega newbs keega qurxinta kooxda in dadku ay dhibaatooyinka ugu badan ku qabaan joogtaynta dhibicooda. Ama aad u dhumuc weyn ama aad u khafiif ah.
Shukulaatada faleebo ah oo aad u dhuuban sidoo kale waxaa ku jira dareere aad u badan ama yahay aad u kulul
Marka bal aan dhex galno labadaas dhibaato iyo sida looga fogaado marka la abuurayo faleejada shukulaatada ugu fiican
Shukulaatada faleebada ah ee lagu sameeyo kareem culus iyo shukulaato
Nooca ugu caansan ee faleebada waxaa lagu sameeyaa shukulaato iyo kareem culus. Haddii aad isku daydo inaad si fudud u dhalaasho shukulaatada oo aad ugu daadiso keega, waxay u muuqan doontaa mid aad u qaro weyn oo geesaha ma simi doonaan. Sababta tani waa shukulaatada kaligeed maahan dareere badan isla marka ay kudhacdo keeg, wuxuu bilaabaa inuu adkaado.
Shukulaatada waxay u baahan tahay xoogaa dareere ah si ay ugu fududaato dhibcaha. Nooca ugu caansan ee dareeraha la isticmaalo waa kareem culus. Marka aad isku qasisid kareem culus shukulaatada waxaad helaysaa wax loo yaqaan ganache. Ganache waxay abuurtaa faleebo qurux badan, waxay u dhigantaa mid adag oo aan dareere ahayn laakiin weli waa jilicsan yahay markii aad dhex gasho.
Halkan waxaa ah keeg isku mid ah oo leh faleebo ganache ah halkii shukulaatada toosan loo dhalaalay. Mahadsanidin Macaan Sharp sawirrada!
Iyada oo ku xidhan shukulaatada aad isticmaasho, waxaad u baahan doontaa inaad hagaajiso qadarka kareemka aad ku darto. Tani aad ayey muhiim u tahay. Shukulaatada madoobaa, kareemo badan ayaad u baahan doontaa. Macno malahan meesha aad ka hesho shukulaatadaada. Waxay noqon kartaa jajab, dhalaal ama laga helo baarka. Waxaan jeclahay inaan isticmaalo shukulaatada yar yar maxaa yeelay si fudud ayey u dhalaalaan.
Shukulaatada mugdiga ah ama khudradda shukulaatada semi-macaan
6 oz shukulaato mugdi ah ama shukulaato semi-macaan
4 oz kareem culus
Saamigaani wuxuu keenaa faleebo ganache kaamil ah waana waxa aan ugu isticmaalay keegga shukulaatada fudud iyo kan moos kala jeexan . Shukulaatada ayaa aad u dhalaalaysa.
Shukulaatada caanaha faleebo
Shukulaatada 6 oz oo caano ah
3 oz kareem culus
Caadi ahaan anigu uma isticmaalo shukulaatada caanaha faleebo sababo la xiriira midabkiisa fudud laakiin haddii ay dhan tahay waxaad haysato, ama aad doorbideyso shukulaatada caanaha, waad isticmaali kartaa saamigan.
Shukulaatada cad cad
6 oz shukulaato cad
2 oz kareem culus
Waxaad arki kartaa in saamigan uu adeegsado kareem aad u yar. Sababtoo ah shukulaatada cad ayaa ka jilicsan shukulaatada madow. Waxaad si fudud ugu midabeyn kartaa faleebadaada shukulaatada cad adoo kudarsanaya dhibic ah jel midabaynta cuntada ganache dhamaaday. Uma baahnid inaad u isticmaasho midabaynta cuntada gaarka ah ganache.
Haddii shukulaatadaada cad ay aad u hufan tahay (waad ka arki kartaa dhexdeeda) waxaad ku dari kartaa dhibic ah midabaynta cuntada cad si aad uga dhigto mid madmadow badan.
Haddii aadan gacanta ku haysan wax kareem culus ah, waxaad u baahan tahay inaad tijaabiso tayda biyo ganache faleebo taas oo aniga aragtidayda ka dhigaysa BEST shukulaatada cadcad.
sida loo sameeyo ubax leh dhaxan
Sida loo sameeyo faleebo shukulaatada ah
Hagaag markaa waxaad haysataa shukulaatadaada oo waad ogtahay inta kareem ee aad ku dari karto. Hadda aan ka dhigno ganacheheenna qulqulaya. Sababtoo ah waxaan isticmaaleynaa qadar yar oo kareem iyo shukulaato ah, waxaan jeclahay inaan isticmaalo microwave laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa digsi iyo dusha dabka hadii aad doorbideyso.
Waxaan kareemkeyga ugu kululeynayaa microwave qiyaastii 1 daqiiqo ama ilaa aan arko uumiga oo ka soo baxaya dusha sare. Isla wax ayaa khuseeya kuleylka dusha sare ee shooladda. HA KARI! Tani waxay kareemkaaga ka dhigeysaa mid aad u kulul waxayna ganacsiyadaada ka dhigeysaa inay noqdaan firidh.
Kadibna waxaan microwave-ka shukulaatadayda ilaa 1 daqiiqo kaliya si aan u kululaado. Ma isku dayayo inaan dhalaaliyo shukulaatada xilligan.
Kadib ku shub kareemka kulul shukulaatada diiran oo fadhiiso 2-3 daqiiqo.
Labada iskuday. Haddii ay jiraan wax buro ah oo aan dhalaalin, dib ugu soo laabo microwave-ka 30 ilbiriqsi oo mar labaad hoos u dhuuq ilaa ay ka siman tahay
Ha ka badin isku darka ama waxaad ku dari doontaa hawada ganache.
Hadda waad ku dari kartaa midabayntaada.
Tilmaamaha faleebada shukulaatada guuleysta
Marka hadda waxaan samaynay ganacheheenii laakiin diyaar uma nihin inaan wali faleebo! Hadaad ganache kulul dusha ka saarto keegaaga dhibcahaaga yari waxay socon doonaan ilaa gunta keega ama way dhalaali doonaan subaggaaga.
Hubso inaad keegaga waxaa lagu qaboojiyey qaboojiyaha 20 daqiiqo ka hor intaadan marin faleebadaada. Keegga qabow wuxuu gacan ka geysan doonaa dejinta shukulaatada oo ka ilaaliya inuu si aad ah uga hooseeyo dhinacyada.
Ganache shukulaatadaada ha qaboojiso ilaa ay dareento uun dirqi ah diiran taabashada. Ma aha inuu kululaado.
Qalabka ugu wanaagsan ee lagu dabakho faleejada shukulaatada
Waxaa jira qaabab badan oo aad ugu codsan karto faleejada shukulaatada keega. Waxaad isticmaali kartaa boorsada tuubbada (aan ugu jeclahay) dhalo caag ah ama xitaa qaaddo. Qalab kasta wuxuu abuuri doonaa muuqaal yar oo ka duwan. Bacda dhuumaha waxay soo saartaa dhibco aad u dhuuban. Qaadada waxay yeelan doontaa muuqaal dabiici ah oo dheeri ah. Midkood waa ok!
Hubso inaad haysatid spatula ama qaaddo miisaanka gacanta ah si aad kor ugu qaaddo dusha sare ee keegaaga isla marka aad dhameyso dhuumahaaga.
Sida loo abuuro dhibco hagaagsan
Sidaan idhi, waxaan jecelahay inaan u isticmaalo boorsada tuubooyinkayga dhibcaha. Bacda tuubbada ayaan dhigaa koob waxaanan ku laalaabaa geesaha kore koobka si aan si fudud ugu buuxiyo shukulaatada. Kadib waan gooyaa caarada. Aad uma weyna waayo ma jecli dhibcaha waaweyn.
Samee faleebo tijaabo ah. Tuuji in yar oo ka mid ah cidhifka keegaaga oo arag haddii joogtayntu ay u egtahay mid hagaagsan oo ay joojinayso daadinta qiyaastii kalabar keega. Haddii ay aad u khafiif tahay oo ay u muuqato mid ku siman keega, ganache-gaagu wuxuu noqon karaa mid aad u kulul ama aad u dhuuban.
Haddii ganache uu aad u qaro weyn yahay oo aanu wada daadin, wuxuu noqon karaa midab aad u badan ama aan dhuubanayn. Hadda waa waqtigii wax laga beddeli lahaa. Way fududahay in laga soo saaro keegaaga hal dhibic oo xun ka dibna dabool dhammaan waxa oo dhan, ogow inay khalad tahay oo dib u bilow mar kale.
Si aan u sameeyo faleebo kaamil ah waxaan ku bilaabayaa anigoo tuuraya faleebo weyn anigoo si tartiib ah u tuuraya bacda dhuumaha, ka dib waan joojinayaa inaan tuujiyo oo aan dhaqaajiyo boorsadayda anigoon kor u qaadin keega. Tani waxay jiidanaysaa shukulaatada. Markaas waad yara cadaadin kartaa si aad u abuurto faleebo yar. Ku sii beddel wacyigelin weyn oo wax yar oo isku ururin ah si aad u abuurto muuqaal faleebo beddelaad ah.
Haddii aad dooneysid in dhibcahaaga oo dhami ay isku mid noqdaan, tuubo qulqulkaaga ugu horreeya ka dib in yar ka dul dhaqaaq oo tuubo isku le'eg. Waxay qaadataa waxoogaa tabo ah in dhibcahaas si isku mid ah looga dhigo. Had iyo jeer waxaan arkaa dhibicyadan saxda ah ee loo adeegsado keegaga rusheeyaha casriga ah.
Marka taasi waa sida aad ugu sameysid shukulaato shukulaato ah keegaaga dhibcaha ah! Waxaan rajaynayaa in tani ay nadiifinayso dhamaan cabsidaada shukulaatada ah iyo keegaaga dhibcaha ah ee soo socdaa uu yahay wadar guul! Fiiri fiidiyowgayga hoose sida loo sameeyo dhibcaha shukulaatada!
Sida loo sameeyo dhibco shukulaato kaamil ah ha ahaato madow, caano ama shukulaato cad. Waa wax walba oo ku saabsan saamiga saxda ah iyo heerkulka. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:137kcal
▢6 oz (170.1 g) shukulaatada nus-macaan ama shukulaatada madow
▢4 oz (113.4 g) kareemka culus ee karbaashka
Cunto karinta shukulaatada
U adeegida:1oz|Kalori:137kcal(7%)|Kaarboohaydraytyada:9g(3%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:10g(shan iyo toban%)|Dufan Dufan:6g(30%)|Kalastarol:16mg(5%)|Sodium:6mg|Kalibaalium:104mg(3%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:6g(7%)|Vitamin A:175IU(4%)|Kaalshiyamka:18mg(laba%)|Bir:1.1mg(6%)
waxyaabaha lagu daro isku darka keega
waa maxay dhadhanka keega jilicsan ee casaanka ah
ku darista bur sanduuqa isku darka keega
sidee u sameysaa calaamadaha 'fondue icing'